Kube muncu kuboshwa abaphila nokukhubazeka | Isolezwe
Kube muncu kuboshwa abaphila nokukhubazeka
Isolezwe / 13 February 2013, 10:46am / NOKUBONGWA PHENYANE
KUSHUBE isimo abantu abaphila nokukhubazeka akade bebhikisha eMbilo bekhala ngoThemba Mkhize abathi akayikhokheli indawo abahlezi kuyo njengoba sebethole ukuthi bazokhishwa ukuphela kwenyanga: ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
12/02/13 DURBAN: ABAPHILA nokukhubazeka babhikishe kuMbilo rd bekhala ngokukhokhiswa izimali zokuhlala ezindlini ekubeni babethenjiswe ukukhokhelwa. esithombeni: omunye wabebebhikisha eboshwa amaphoyisa. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
BAGCINE ngokuthi baboshwe abantu abakhubazekile abakhishwa eflethini eClarendon, eThekwini, bekhala ngesikhulu senhlangano abangaphansi kwayo iKwaZulu-Natal Society for the Blind esingayikhokheli irenti kuleli bhilidi abagobe kulo amadlangala.
Izolo labantu abakhubazekile abalinganiselwa ku-40 baqome ukubhikisha ngaphandle kwamahhovisi enhlangano iKZN Society for the Blind, eMbilo bekhala ngesikhulu sale nhlangano esingayikhokheli indawo abahlala kuyo nakuba sayithola imali eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi esifundazweni.
Ngonyaka odlule laba bakhishwa endaweni akade behlala kuyo emgwaqweni uMadi Mfusi (St Georges) ngoba isalungiswa kabusha emuva kokuba kutholakale ukuthi ayisaphephile ukuthi ingahlala abantu abakhubazekile. Ngesikhathi bebhikisha bebekhala ngesikhulu sale nhlangano, uMnuz Themba Mkhize, abathi akayikhokhi irenti.
Laba bantu okukhona kubo abangaboni, abahamba ngezinduku nezihlalo ezinamasondo nabangezwa bebekhala ngokuthi abazi bazohlala kuphi njengoba bezokhishwa kule ndawo.
Kushube isimo ngesikhathi kufika amaphoyisa kule ndawo abopha amanye amalungu ebasola ngokubhikisha kuleya ndawo ethi baphazamisa inhlalakahle yomphakathi.
UMnuz Monde Kheswa okhubazekile uthe okubenza babhikishe ukuthi abazi bazoyaphi uma kwenzeka bekhishwa lapho behlala khona ngoba sebetholile ukuthi indawo iyabaphelela.
“Ngonyaka odlule sakhishwa lapho besihlala khona ngoba kuthiwa kuyalungiswa kodwa kuze kube manje akukho okwenzakalayo kuyona. Kwathiwa asambe siyohlala lapho esikhona njengamanje kodwa umnikazi wendawo wasitshela ukuthi indawo yethu iphelile ngenxa yokuthi uMkhize akasakhoki,” kusho uKheswa.
Uthe ngeke kubathene amandla ukuthi kukhona ababoshwayo kubo ngoba balwelwa amalungelo abo.
“Lapha sihlala khona sibuye kuthiwe asikhokhe ngoba uMkhize akakhokhi lutho, sithathe yona imali yempesheni le encane sifake yona,” kuchaza yena.
Imizamo yokuthola uMkhize ukuze aziphendulele kulolu daba ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
Nakuba Isolezwe lizibonele ababhikishi abakhubazekile beboshwa kodwa okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Jay Naicker, uthe abekho ababoshiwe kule ndawo kodwa amaphoyisa abekhona ukuzoqinisekisa ezokuphepha kuleya ndawo.
Okushiwo uNaicker kuphambene nobekwenzeka njengoba laba abakhubazekile ngesikhathi beboshwa bebebonakala bezabalaza befakwa emavenini kanti iningi eliboshiwe ngelingaboni.